ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပတ်လမ်း ဖောက်လုပ်ရေး ခုခံချေပချက်
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် မှာ တက္ကသိုလ်ပတ်လမ်း ဖောက်လုပ်မယ့် ကိစ္စဟာ လူတချို့ စိုးရိမ်နေသလို တက္ကသိုလ်ရဲ့ မူလသွင်ပြင်လက္ခဏာ တွေကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေမှာ မဟုတ်ဘဲ သင်ယူမှုပတ်ဝန်းကျင် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် စိမ်းလန်းစိုပြေအောင် လုပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပညာရေးမြှင့်တင်မှုကော်မီတီ ဥက္ကဌ ဒေါက်တာတင်အောင်က ပြောပါတယ်။ အခု ယာယီရပ်ဆိုင်းထားတဲ့ ဒီစီမံကိန်းကို ကျောင်းသားတွေ ကျောင်းသားဟောင်းတွေေ ကျနပ်အောင် ကော်မီတီက ညှိနှိုင်းလုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လဲ သူကိုယ်တိုင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားဟောင်း ဆရာဟောင်းတဦးဖြစ်ခဲ့သူ ဒေါက်တာတင်အောင်ကဆိုပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဦးကျော်ဇံသာ ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းတဲ့အခါ သူကအခုလို စပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒေါက်တာတင်အောင်။ ။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဆိုတာ တချိန်က ကျနေ်ာတို့ နိုင်ငံတင် မကဘူး အရှေ့တောင်အာရှမှာ No. 1 ထိပ်ဆုံးရောက်နေတဲ့ တက္ကသိုလ် တခု။ အဲတော့ ဒီလို ထိပ်ဆုံးရောက်ခဲ့တာ ဘာတွေလဲလို့ ကျနော်တို့ ပြန်ကြည့်ရင် ကျနေ်ာတို့ တက္ကသိုလ်ရဲ့ အခြေခံ အဆောက်အအုံကောင်းခြင်း၊ သန့်ရှင်း သာယာခြင်း၊ ဒါတွေက အစ သူ့ရဲ့ ပညာရပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ Quality ဘာညာ ဒါတွေကတော့ ပို အရေးကြီးတာပေါ့။ ခုန အချက်တွေကလည်း ပါတယ်။ စိမ်းလန်း စိုပြေရမယ်။ တနည်းအားဖြင့် သင်ယူမှု ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်း ရရမယ်။ အဲလို ရဖို့ ဆိုရင် ဒီတက္ကသိုလ်ကြီးကို ပြန်ပြင်ရမယ် ဆိုပြီးတော့ ကျနော်တို့ အစိုးရ မတက်ခင် ကတည်းက ဒီစီမံကိန်းကို စဉ်းစားခဲ့တယ်။ အဲဒီ အချိန်က အကောင်အထည် ဖော်နိုင်အား မရှိဘူး။
ဦးကျော်ဇံသာ။ ။ ဘာများ အဲဒီ အဆောက်အအုံတွေ ပတ်လမ်းတွေ ပြင်ဖို့ လိုသလဲ ခင်ဗျ။ ခုနလို ဖြစ်ဖို့ အတွက် အဲဒီဟာတွေ ပြင်ဖို့ လိုပါလား။
ဒေါက်တာတင်အောင်။ ။ ကျနော်တို့ အခု လောလောဆယ်တော့ အဓိပဓိလမ်း အ၀င်ရဲ့ ဘယ် ညာမှာပေါ့လေ ဆရာများ သမဂ္ဂ အဆောက်အအုံ၊ ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ အဆောက်အအုံ ဆောက်ဖို့ ကျနော်တို့ Plan ဆွဲထားပါတယ်။ ခုန အဓိပဓိ လမ်းထဲကနေ ကားတွေ Block ဖြစ်နေတယ်။ ဖြစ်နေတဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့ ကျနော်တို့က အဲဒီ အဓိပဓိ လမ်းကို လမ်းလျှောက်ပြီး သုံးပြီးတော့ ဒီလို ပတ်လမ်းက သွားလို့ ရှိရင် အနည်းငယ်တော့ သစ်ပင်လေးတွေ ပျက်မယ်လို့ ကျနော်တို့လည်း တချိန်ကတော့ တွက်ဆထားတယ်။ အခုတော့ ဒီလောက် များလား မများလားလို့ ကျနော်တို့လည်း မသိပါဘူး။ အဲဒီ အတွက် ခုတ်တယ်လို့ ကျနော် ထင်ပါတယ်။ နောက်တခုက ပြည်သူတွေ ကျောင်းသားဟောင်းတွေ ပြောပြောနေတဲ့ အဓိပဓိ လမ်းက ၀င်တဲ့ ဘယ်ညာမှာ ကျနော်တို့လည်း အဲဒါတွေကို နိုင်ငံတကာ တက္ကသိုလ်တွေလို မြက်ခင်းတွေ အကုန်စိုက်မှာ။ တနည်းအားဖြင့် သံဆူးကြိုးတွေ ခတ်ထားတဲ့ RC ကြီးကို သံဆူးကြိုး ခတ်ထားတယ်။
ဟို ကျနော်တို့ ဂျပ်ဆင် ကောလိပ်ကြီးနားမှာ သံဆူးကြိုးတွေ ခတ်ထားတယ်။ ဒါတွေ ကျနေ်ာတို့က အကုန်ဖြုတ်မှာ။ အကုန် အုတ်တံတိုင်းတွေကို ဖြုတ်မယ်။ ပြီးရင် ကျနော်တို့က မြက်တွေ စိုက်မယ်။ အဲဒါကို ပြည်သူကလည်း မသိဘူး။ ကျောင်းသားကလည်း မသိဘူး။ ကျနေ်ာတို့လည်း အဲဒီ ခြံစည်ရိုး ဘယ်ညာကို နိုင်ငံတကာ တက္ကသိုလ်လို မြက်စိုက်ပြီးတော့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကြီးက ကြည့်လိုက်ရင် ရှင်းလင်းနေရမယ်။ အဓိပဓိ လမ်းကြီးလည်း အဝေးကကြည့်ရင် ရှင်းနေရမယ်။ ဘွဲ့နှင်းသဘင်ကို သွားတဲ့ အချိန်မှာ ဒီ ကားတွေ Block ဖြစ်နေတယ်။ ကွယ်နေတယ်။ ကျနော်တို့ လုပ်ချင်တဲ့ မြက်စိုက်မှာတွေနဲ့ ဒါက မသင့်တော်ဘူး။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့က အဲဒီ ခုနက ပတ်လမ်း စီမံကိန်းမှာ ကျနော်တို့က လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လောက် ကတည်းက စပြီးတော့ နိုင်ငံတကာနဲ့ ဒီဟာလေးတွေကို Plan လေး တခု ချပြီးတော့ ကျနော်တို့ အကောင်အထည်ဖော်နေတာ။
ဦးကျော်ဇံသာ။ ။ ကျနော်တို့ ကျောင်းသား တုန်းက ဆိုရင် သစ်ပင်တွေက Botanical Names တွေ၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ၀င်းထဲမှာ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ သစ်ပင် အမျိုးအစား အားလုံးပေါ့လေ အစုံဖြစ်အောင် စိုက်ထားမယ် ဘာညာ ဆိုပြီးတော့ Botany Department က ထင်ပါတယ် အဲလို လုပ်ခဲ့တယ်လို့ ကြားပါတယ်။ အခု လမ်း ဖောက်ဖို့ သစ်ပင်ခုတ်တော့ အဲဒါတွေ အကုန်ပျက်မှာပေါ့။
ဒေါက်တာတင်အောင်။ ။ မဟုတ်ဘူး ခင်ဗျ။ အဲဒါ လူတွေက အထင်အမြင်မှားတာ။ ကျနော်တို့က ဒီအပင်ကြီးတွေကိုလည်း ဒီထက်ကောင်းအောင် ဒီဆိုင်းဘုတ်လေးတွေ ကိုလည်း ဒီထက် လူမြင်အောင်၊ ဒီအပင်တွေကိုလည်း ပျောက်ပျက်မသွားအောင်၊ ကျနော်တို့ ဒီအပင်တွေကို တို့မှာ ထိမှာ မဟုတ်ဘူး။ ခုန ပတ်လမ်းဆိုတဲ့ နေရာမျိုးက ခြံစည်းရိုးဘေးမှာ ရှိတာ။ ကျနော်တို့လည်း ကွင်းတော့ တခါဆင်းကြည့်ပါတယ်။ ခုနလို အပင်ကြီးတွေတော့ မညိဘူး။ အဲဒီ အပင်ကြီးတွေကို ကျနော်တို့ မခုတ်ဘူး။ နောင် တက်လာတဲ့ အပင်လေးတွေ ရှိတယ်၊ ကိုင်းတွေ ရှိတယ်။ ကား ၂စီး ရှောင်သွားရုံ လောက်ကို ကျနော်တို့က ခုတ်မှာ။
ဦးကျော်ဇံသာ။ ။ အခု အဲဒီ စီမံကိန်းကို ခန ရပ်ဆိုင်း ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဆိုတော့ အဲဒီ စီမံက်ိန်း ရှေ့တိုး လုပ်ဆောင်သင့်တယ်လို့ ဆရာ့ အနေနဲ့ကတော့ ခံယူတယ်ပေါ့။
ဒေါက်တာတင်အောင်။ ။ ဟို ဒါက ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ဖို့ လုပ်တာပါ။ သစ်ပင်ကြီးတွေ ခုတ်တဲ့ အဆင့်တော့ ကျနော်တို့ မလုပ်ပါဘူး။ သို့သော် လုပ်သင့်တဲ့ အလုပ်ကို လုပ်တာလို့ဘဲ ကျနော်တို့ မြင်ပါတယ်။ ဒါ ကျနော်တို့ စီမံကိန်းနဲ့ ချတယ်။ ကျနော်တို့ တော်တော်လေး စဉ်းစား ပြီးမှ ဒီအလုပ်ကို လုပ်တာပါ။ ဒါကြောင့် နောင်ကို ကျောင်းသားတွေ ကျေနပ်အောင် ကျောင်းသားဟောင်းတွေ ကျေနပ်အောင် ထိခိုက်မှု အနည်းဆုံး ဖြစ်အောင် လုပ်ပြီးတော့ ကျနော်တို့က စဉ်းစား ထားတယ်ပေါ့။ ကော်မတီနဲ့ဘဲ ဆုံးဖြတ် ပေးပါလိမ့်မယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ။ ။ စောစောက ဆရာပြောသွားတဲ့ အထဲမှာ ကျနော် စိတ်ဝင်စားတာ အဓိပဓိလမ်း ဒီဘက်မှာ ကျောင်းသား သမဂ္ဂ ဆောက်မယ်၊ ကျောင်းသား သမဂ္ဂ ဆောက်မယ့် ကိစ္စကလည်း သိပ်ပြီး Controversial (အငြင်းပွားစရာ) တချို့က ဘာမဖြစ်စေနဲ့ ဘယ်လို ဘယ်ညာ ... အခုက ဘယ်လိုနေပါလဲ ခင်ဗျ။
ဒေါက်တာတင်အောင်။ ။ မဟုတ်ဘူးခင်ဗျ။ အခုက ကျနော်တို့ အရင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အဆောက်အအုံနဲ့ မတူဘူး။ အခု လက်ရှိ ပေါ်နေတဲ့ ကျောင်းသား သမဂ္ဂတွေကို ကျနော်တို့က ရုံးခန်း တွေ ပေးရတယ်။ ဆရာများ သမဂ္ဂ တွေကိုလည်း ရုံးခန်းတွေ ပေးရတယ်။ အဲဒီ အဆောက်အအုံလေးတွေ ဆောက်မှာ။ ဟို ကောင်ကြီးနဲ့ မဆိုင်ဘူး။ ဟိုကောင်ကြီးက ကျနော်တို့ သိန်း ၅၀၀၀ ဟို လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ် ကတည်းက ပေးထားပြီးသားပါ။ ကျနော်က အတည်ပြုရတာကိုး။ အဲဒါကြီးက နိုင်ငံတော် ခန ပြန်လည်အပ်ထားတယ်။ အဲဒါကြီးကို မလုပ်သေးပါဘူး။ အဲဒါကြီးကတော့ အခြေအနေ အရ အားလုံးကလည်း သဘောတူမယ်။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း ကျောင်းသား ဟောင်းပါဘဲ။ ကျောင်းသားဟောင်းတွေက သဘောတူမယ် ဆိုရင်တော့ ဒီနေရာမှာ ကျနော်တို့က ဆောက်ချင်လို့ ကျနော်တို့ က နိုင်ငံတော် ပိုက်ဆံ အတည်ပြုပြီးတော့ ချပေး ထားတာ။ အခုတော့ အဲဒါလေးတွေတော့ နည်းနည်း အခက်အခဲ ဖြစ်နေတော့ ရန်ကုန်တိုင်း ဦးဖြိုးမင်းသိန်းတို့ နဲ့ ခုန ကျောင်းသားဟောင်းတွေနဲ့ အကုန်လုံး ညှိနှိုင်းနေတယ်။ အဲဒါတော့ ဘယ်အဆင့် ရောက်ပြီလဲ ကျနော်တို့ မသိသေးပါဘူး။ လောလောဆယ်တော့ မလုပ်နိုင်သေးဘူး ဆိုတာဘဲ ကျနော် သိပါတယ်။
ရနျကုနျတက်ကသိုလျပတျလမျး ဖောကျလုပျရေး ခုခံခပြေခကျြ
ရနျကုနျတက်ကသိုလျ မှာ တက်ကသိုလျပတျလမျး ဖောကျလုပျမယျ့ ကိစ်စဟာ လူတခြို့ စိုးရိမျနသေလို တက်ကသိုလျရဲ့ မူလသှငျပွငျလက်ခဏာ တှကေို ထိခိုကျပကျြစီးစမှော မဟုတျဘဲ သငျယူမှုပတျဝနျးကငျြ ပိုမိုကောငျးမှနျအောငျ စိမျးလနျးစိုပွအေောငျ လုပျဖို့ ရညျရှယျခွငျးသာဖွဈတယျလို့ ပွညျသူ့လှတျတျော ပညာရေးမွှငျ့တငျမှုကျောမီတီ ဥက်ကဌ ဒေါကျတာတငျအောငျက ပွောပါတယျ။ အခု ယာယီရပျဆိုငျးထားတဲ့ ဒီစီမံကိနျးကို ကြောငျးသားတှေ ကြောငျးသားဟောငျးတှေေ ကနြပျအောငျ ကျောမီတီက ညှိနှိုငျးလုပျဆောငျသှားမယျလို့လဲ သူကိုယျတိုငျ ရနျကုနျတက်ကသိုလျ ကြောငျးသားဟောငျး ဆရာဟောငျးတဦးဖွဈခဲ့သူ ဒေါကျတာတငျအောငျကဆိုပါတယျ။ ဒီကိစ်စနဲ့ပတျသကျပွီး ဦးကြျောဇံသာ ကတှဆေံ့မေးမွနျးတဲ့အခါ သူကအခုလို စပွောခဲ့ပါတယျ။
ဒေါကျတာတငျအောငျ။ ။ ရနျကုနျတက်ကသိုလျ ဆိုတာ တခြိနျက ကနျြောတို့ နိုငျငံတငျ မကဘူး အရှတေ့ောငျအာရှမှာ No. 1 ထိပျဆုံးရောကျနတေဲ့ တက်ကသိုလျ တခု။ အဲတော့ ဒီလို ထိပျဆုံးရောကျခဲ့တာ ဘာတှလေဲလို့ ကနြျောတို့ ပွနျကွညျ့ရငျ ကနျြောတို့ တက်ကသိုလျရဲ့ အခွခေံ အဆောကျအအုံကောငျးခွငျး၊ သနျ့ရှငျး သာယာခွငျး၊ ဒါတှကေ အစ သူ့ရဲ့ ပညာရပျပိုငျး ဆိုငျရာ Quality ဘာညာ ဒါတှကေတော့ ပို အရေးကွီးတာပေါ့။ ခုန အခကျြတှကေလညျး ပါတယျ။ စိမျးလနျး စိုပွရေမယျ။ တနညျးအားဖွငျ့ သငျယူမှု ပတျဝနျးကငျြကောငျး ရရမယျ။ အဲလို ရဖို့ ဆိုရငျ ဒီတက်ကသိုလျကွီးကို ပွနျပွငျရမယျ ဆိုပွီးတော့ ကနြျောတို့ အစိုးရ မတကျခငျ ကတညျးက ဒီစီမံကိနျးကို စဉျးစားခဲ့တယျ။ အဲဒီ အခြိနျက အကောငျအထညျ ဖျောနိုငျအား မရှိဘူး။
ဦးကြျောဇံသာ။ ။ ဘာမြား အဲဒီ အဆောကျအအုံတှေ ပတျလမျးတှေ ပွငျဖို့ လိုသလဲ ခငျဗြ။ ခုနလို ဖွဈဖို့ အတှကျ အဲဒီဟာတှေ ပွငျဖို့ လိုပါလား။
ဒေါကျတာတငျအောငျ။ ။ ကနြျောတို့ အခု လောလောဆယျတော့ အဓိပဓိလမျး အဝငျရဲ့ ဘယျ ညာမှာပေါ့လေ ဆရာမြား သမဂ်ဂ အဆောကျအအုံ၊ ကြောငျးသားမြား သမဂ်ဂ အဆောကျအအုံ ဆောကျဖို့ ကနြျောတို့ Plan ဆှဲထားပါတယျ။ ခုန အဓိပဓိ လမျးထဲကနေ ကားတှေ Block ဖွဈနတေယျ။ ဖွဈနတေဲ့ အတှကျကွောငျ့မို့ ကနြျောတို့က အဲဒီ အဓိပဓိ လမျးကို လမျးလြှောကျပွီး သုံးပွီးတော့ ဒီလို ပတျလမျးက သှားလို့ ရှိရငျ အနညျးငယျတော့ သဈပငျလေးတှေ ပကျြမယျလို့ ကနြျောတို့လညျး တခြိနျကတော့ တှကျဆထားတယျ။ အခုတော့ ဒီလောကျ မြားလား မမြားလားလို့ ကနြျောတို့လညျး မသိပါဘူး။ အဲဒီ အတှကျ ခုတျတယျလို့ ကနြျော ထငျပါတယျ။ နောကျတခုက ပွညျသူတှေ ကြောငျးသားဟောငျးတှေ ပွောပွောနတေဲ့ အဓိပဓိ လမျးက ဝငျတဲ့ ဘယျညာမှာ ကနြျောတို့လညျး အဲဒါတှကေို နိုငျငံတကာ တက်ကသိုလျတှလေို မွကျခငျးတှေ အကုနျစိုကျမှာ။ တနညျးအားဖွငျ့ သံဆူးကွိုးတှေ ခတျထားတဲ့ RC ကွီးကို သံဆူးကွိုး ခတျထားတယျ။
ဟို ကနြျောတို့ ဂပျြဆငျ ကောလိပျကွီးနားမှာ သံဆူးကွိုးတှေ ခတျထားတယျ။ ဒါတှေ ကနျြောတို့က အကုနျဖွုတျမှာ။ အကုနျ အုတျတံတိုငျးတှကေို ဖွုတျမယျ။ ပွီးရငျ ကနြျောတို့က မွကျတှေ စိုကျမယျ။ အဲဒါကို ပွညျသူကလညျး မသိဘူး။ ကြောငျးသားကလညျး မသိဘူး။ ကနျြောတို့လညျး အဲဒီ ခွံစညျရိုး ဘယျညာကို နိုငျငံတကာ တက်ကသိုလျလို မွကျစိုကျပွီးတော့ ရနျကုနျတက်ကသိုလျကွီးက ကွညျ့လိုကျရငျ ရှငျးလငျးနရေမယျ။ အဓိပဓိ လမျးကွီးလညျး အဝေးကကွညျ့ရငျ ရှငျးနရေမယျ။ ဘှဲ့နှငျးသဘငျကို သှားတဲ့ အခြိနျမှာ ဒီ ကားတှေ Block ဖွဈနတေယျ။ ကှယျနတေယျ။ ကနြျောတို့ လုပျခငျြတဲ့ မွကျစိုကျမှာတှနေဲ့ ဒါက မသငျ့တျောဘူး။ ဒါကွောငျ့ ကနြျောတို့က အဲဒီ ခုနက ပတျလမျး စီမံကိနျးမှာ ကနြျောတို့က လှနျခဲ့တဲ့ ၂ နှဈလောကျ ကတညျးက စပွီးတော့ နိုငျငံတကာနဲ့ ဒီဟာလေးတှကေို Plan လေး တခု ခပြွီးတော့ ကနြျောတို့ အကောငျအထညျဖျောနတော။
ဦးကြျောဇံသာ။ ။ ကနြျောတို့ ကြောငျးသား တုနျးက ဆိုရငျ သဈပငျတှကေ Botanical Names တှေ၊ ရနျကုနျတက်ကသိုလျ ဝငျးထဲမှာ။ မွနျမာနိုငျငံမှာ ရှိတဲ့ သဈပငျ အမြိုးအစား အားလုံးပေါ့လေ အစုံဖွဈအောငျ စိုကျထားမယျ ဘာညာ ဆိုပွီးတော့ Botany Department က ထငျပါတယျ အဲလို လုပျခဲ့တယျလို့ ကွားပါတယျ။ အခု လမျး ဖောကျဖို့ သဈပငျခုတျတော့ အဲဒါတှေ အကုနျပကျြမှာပေါ့။
ဒေါကျတာတငျအောငျ။ ။ မဟုတျဘူး ခငျဗြ။ အဲဒါ လူတှကေ အထငျအမွငျမှားတာ။ ကနြျောတို့က ဒီအပငျကွီးတှကေိုလညျး ဒီထကျကောငျးအောငျ ဒီဆိုငျးဘုတျလေးတှေ ကိုလညျး ဒီထကျ လူမွငျအောငျ၊ ဒီအပငျတှကေိုလညျး ပြောကျပကျြမသှားအောငျ၊ ကနြျောတို့ ဒီအပငျတှကေို တို့မှာ ထိမှာ မဟုတျဘူး။ ခုန ပတျလမျးဆိုတဲ့ နရောမြိုးက ခွံစညျးရိုးဘေးမှာ ရှိတာ။ ကနြျောတို့လညျး ကှငျးတော့ တခါဆငျးကွညျ့ပါတယျ။ ခုနလို အပငျကွီးတှတေော့ မညိဘူး။ အဲဒီ အပငျကွီးတှကေို ကနြျောတို့ မခုတျဘူး။ နောငျ တကျလာတဲ့ အပငျလေးတှေ ရှိတယျ၊ ကိုငျးတှေ ရှိတယျ။ ကား ၂စီး ရှောငျသှားရုံ လောကျကို ကနြျောတို့က ခုတျမှာ။
ဦးကြျောဇံသာ။ ။ အခု အဲဒီ စီမံကိနျးကို ခန ရပျဆိုငျး ထားတယျလို့ သိရပါတယျ။ ဆိုတော့ အဲဒီ စီမံကိနျး ရှတေို့း လုပျဆောငျသငျ့တယျလို့ ဆရာ့ အနနေဲ့ကတော့ ခံယူတယျပေါ့။
ဒေါကျတာတငျအောငျ။ ။ ဟို ဒါက ဖှံ့ဖွိုး တိုးတကျဖို့ လုပျတာပါ။ သဈပငျကွီးတှေ ခုတျတဲ့ အဆငျ့တော့ ကနြျောတို့ မလုပျပါဘူး။ သို့သျော လုပျသငျ့တဲ့ အလုပျကို လုပျတာလို့ဘဲ ကနြျောတို့ မွငျပါတယျ။ ဒါ ကနြျောတို့ စီမံကိနျးနဲ့ ခတြယျ။ ကနြျောတို့ တျောတျောလေး စဉျးစား ပွီးမှ ဒီအလုပျကို လုပျတာပါ။ ဒါကွောငျ့ နောငျကို ကြောငျးသားတှေ ကနြေပျအောငျ ကြောငျးသားဟောငျးတှေ ကနြေပျအောငျ ထိခိုကျမှု အနညျးဆုံး ဖွဈအောငျ လုပျပွီးတော့ ကနြျောတို့က စဉျးစား ထားတယျပေါ့။ ကျောမတီနဲ့ဘဲ ဆုံးဖွတျ ပေးပါလိမျ့မယျ။
ဦးကြျောဇံသာ။ ။ စောစောက ဆရာပွောသှားတဲ့ အထဲမှာ ကနြျော စိတျဝငျစားတာ အဓိပဓိလမျး ဒီဘကျမှာ ကြောငျးသား သမဂ်ဂ ဆောကျမယျ၊ ကြောငျးသား သမဂ်ဂ ဆောကျမယျ့ ကိစ်စကလညျး သိပျပွီး Controversial (အငွငျးပှားစရာ) တခြို့က ဘာမဖွဈစနေဲ့ ဘယျလို ဘယျညာ ... အခုက ဘယျလိုနပေါလဲ ခငျဗြ။
ဒေါကျတာတငျအောငျ။ ။ မဟုတျဘူးခငျဗြ။ အခုက ကနြျောတို့ အရငျ ကြောငျးသားသမဂ်ဂ အဆောကျအအုံနဲ့ မတူဘူး။ အခု လကျရှိ ပျေါနတေဲ့ ကြောငျးသား သမဂ်ဂတှကေို ကနြျောတို့က ရုံးခနျး တှေ ပေးရတယျ။ ဆရာမြား သမဂ်ဂ တှကေိုလညျး ရုံးခနျးတှေ ပေးရတယျ။ အဲဒီ အဆောကျအအုံလေးတှေ ဆောကျမှာ။ ဟို ကောငျကွီးနဲ့ မဆိုငျဘူး။ ဟိုကောငျကွီးက ကနြျောတို့ သိနျး ၅၀၀၀ ဟို လှနျခဲ့တဲ့ ၂ နှဈ ကတညျးက ပေးထားပွီးသားပါ။ ကနြျောက အတညျပွုရတာကိုး။ အဲဒါကွီးက နိုငျငံတျော ခန ပွနျလညျအပျထားတယျ။ အဲဒါကွီးကို မလုပျသေးပါဘူး။ အဲဒါကွီးကတော့ အခွအေနေ အရ အားလုံးကလညျး သဘောတူမယျ။ ကနြျောကိုယျတိုငျလညျး ကြောငျးသား ဟောငျးပါဘဲ။ ကြောငျးသားဟောငျးတှကေ သဘောတူမယျ ဆိုရငျတော့ ဒီနရောမှာ ကနြျောတို့က ဆောကျခငျြလို့ ကနြျောတို့ က နိုငျငံတျော ပိုကျဆံ အတညျပွုပွီးတော့ ခပြေး ထားတာ။ အခုတော့ အဲဒါလေးတှတေော့ နညျးနညျး အခကျအခဲ ဖွဈနတေော့ ရနျကုနျတိုငျး ဦးဖွိုးမငျးသိနျးတို့ နဲ့ ခုန ကြောငျးသားဟောငျးတှနေဲ့ အကုနျလုံး ညှိနှိုငျးနတေယျ။ အဲဒါတော့ ဘယျအဆငျ့ ရောကျပွီလဲ ကနြျောတို့ မသိသေးပါဘူး။ လောလောဆယျတော့ မလုပျနိုငျသေးဘူး ဆိုတာဘဲ ကနြျော သိပါတယျ။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ပတ်လမ်းကိစ္စ ဆန္ဒပြကျောင်းသားနဲ့ တက္ကသိုလ်အုပ်ချုပ်ရေး ပြေလည်မှုရ
၇ ဇူလှိုင်နှစ်ပတ်လည် သမဂ္ဂနေရာဟောင်း စုဝေးကျင်းပ